Qarax ka dhacay Magaalada Gaalkacyo | KEYDMEDIA ONLINE
Qarax uu ku dhintay hal qof tiro kale oo dad ahna ay ku dhaawacmeen ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug
GAALKACYO, Soomaaliya - Magaalada Gaalkacyo oo xaaladda ammaankeeda sii xumaaneysay bilihii u dambeeyay waxaa goor dhaw ka dhacay qarax sababay dhimasho hal ruux oo darawal gaari ahaa, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay tiro dada oo aan la shaacin weli inta ay la eg yihiin.
Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhaw garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee dhinaca waqooyi, waxaana qaraxa uu halka ruux ku dhintay lagu sheegay miino lagu aasay waddada dhinaceeda, iyadoo weli aysan jirin warar dheeri ah oo kasoo baxay qaraxa iyo cidda lala beegsaday, inkastoo loo maleenayo in ay ka dambeeyaan kooxda Al-Shabaab oo ku caan baxday qaraxyada nuucan oo kale ah in ay ka fuliso magaalooyinka waa weyn ee Soomaaliya.
Maamulka Puntland ee magaalada Gaalkacyo weli kama uusa hadlin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa, balse dad goob joogayaal ah ayaa waxay noo xaqiijiyeen dhimashada darawalka gaariga uu haleelay qaraxa, iyadoo la filayo saacadaha soo aaddan in ay war ka soo saari doonaan maamulka degmada Gaalkacyo ee Puntland.
Toddobaadyadii ina dhaafay waxaa magaalada Gaalkacyo ku geeriyooday saraakiil ka tirsan Ciidamada Xoogga Dalka Soomaliya, waxaana qof naftii hallige ah oo isa soo miidaamiyay uu dhexda ka istaagay saraakiisha oo ku guda jirtay soo dhaweynta wafdi uu hoggaminayay RW Rooble iyo madaxweynaha Galmudug.
Isla toddobaadkan waxaa magaalada Gaalkacyo ku kulmay madaxweyna yaasha Galmudug iyo Puntland kuwaasoo yeeshay Shir Iskaashi ah oo u dhaxeeya labada maamul, loogana hadlayay ammaanka Gaalkacyo oo sii xumaanaysay maalmihii lasoo dhaafay.